I-glaucoma kuyinto isifo esingelapheki futhi libhekwa ngochwepheshe iyingozi. uphawu wayo isici liphakeme ingcindezi intraocular. Kungaba ngezinye izikhathi uye phansi, futhi kungaba njalo futhi njalo alokhu ephezulu. Umphumela walesi sifo singumbulali ephonsa acuity ezibukwayo, bezibona ubalekela ukunemba i- isibuyekezo. Ezigabeni zokuqala yentuthuko glaucoma akubangi ukungakhululeki isiguli, ngakho-ke ungakwazi kuphela ukuxilonga ophthalmologist oqhuba ukuhlolwa. Lapho sitholakele "glaucoma" ukusebenza is ngenakugwemeka.
Kuze kube manje, izimbangela esiqondile glaucoma ungekho. Kodwa kukhona izinto ezimbalwa ukuthi nomthelela ekuthuthukiseni lesi sifo. Ngokuvamile, lesi sifo sihlasela abantu abaneminyaka ephakathi kweminyaka engamashumi amane. Omdala umuntu uthola, aba maningi amathuba okuba asathuthuka lesi sifo. Esinye isici okufana iyafana sifo izihlobo. Namanje uphethwe "glaucoma" izizathu efuna phakathi eziningi ezingenza. lokhu
- yezifo yisimiso senhliziyo nemithambo yegazi,
- ngaphambili idluliselwe isifo samehlo,
- ukulimala, nemihuzuko ebusweni,
- imisebenzi eyenziwa phambi,
- isifo sikashukela.
Uma kukhona okungenani yezimbangela ukuthi kungaba ukuqala ukuxilongwa "glaucoma", kukhona isizathu ukubona udokotela ukuze lihlolwa ngokucophelela.
Umbuzo ovamile kakhulu ohlupha abantu kwathiwa unesifo "glaucoma" - operation akunakugwenywa? Ngeshwa, yebo, ukuhlinzwa kuphela kungasiza ukwelapha lesi sifo. Enye wokutakula kusukela glaucoma okwamanje. Labo izimali lekartsvennye ukuthi kukhona kuphela kancane ukunciphisa izimpawu izimpawu isifo, kodwa musa balahle kubo unomphela.
Lesi sifo kusaqalwa akusho ukuzibonakalisa. Kuphela kwezinye izinhlobo glaucoma kungenziwa lacrimation, ukuphendula acute anda ukuze emizweni ukukhanya, noma ubuhlungu emehlweni. Ukuzizwa iyiphi izimpawu perechiselnnyh kufanele ubone udokotela ukuhlolwa. Ngokwengxenye enkulu lesi sifo sithinta abantu yobudala emaphakathi futhi ubudala, ngakho udinga ukuthatha ukuhlolwa zokuvimbela okungenani kanye ngonyaka. Ngaphezu kwalokho, ukubaluleka kwalezi Luhlolo okungahambisani ukuzibonakalisa e kusaqalwa udokotela glaucoma ngokushesha ukuze kubonakale. I ngaphambili lesi sifo sitholakale umuntu, aba maningi amathuba okuba okuphumelela ekwelapheni. Lapho sitholakele "glaucoma" msebenzi indlela yokwelashwa, okuyinto kunemiphumela emihle.
Lesi sifo ngeke welaphe ngokuphelele ngoba ezingamahlalakhona. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngenxa glaucoma yokunciphisa izingcindezi intraocular, kodwa akusho ukumisa ukuqhubeka kwesifo. Futhi ngenxa msebenzi ungenziwa silondoloze umbono omuhle.
Kulesi sigaba ukuthuthukiswa umuthi izinga okusezingeni eliphezulu kakhulu futhi kuwusizo ukuhlinzwa wokufundwayo laser. Ngemva awabambe etholwe yalokho ozinzile futhi ezinhle, nalo lonke yokulimala kwamehlo lincishisiwe. Kuphethe i operation ezifana kuthatha isikhathi esincane, kanye laser enza iso yesibili.
Lapho sitholakele "glaucoma", ukusebenza, noma akunakugwenywa, kodwa ivumela ukufeza Dynamics omuhle ekwelapheni isifo, imiphumela uhambisane, futhi okubaluleke - ukulondoloza umbono.
I-glaucoma - isifo esiyingozi esingelapheki kufanele kuthathwe ngokushesha. Njengomthetho, imithi yokwelashwa alinikezi ubufakazi ngemiphumela emihle. Ngakho-ke kuyinto ephumelela kakhulu iphendukele ukuhlinzwa laser. Inqubo ukwelashwa esigulini esingalalisiwe esibhedlela futhi indlela kuthatha imizuzu embalwa. imiphumela postoperative incane khona, futhi ukucindezela intraocular kuza emuva evamile, futhi zonke zinkomba kwesejwayelekile.
Diopter - ... kuba isici esibalulekile empilweni iso
Wenzenjani ukupela igama elithi "okulungile"? Sithola ndawonye
Lapho Ubusika Seagull? Amaqiniso ethakazelisayo le seagull
Origami "Jumping Ixoxo". ukusebenza inqubo
Amazwibela: "Demon" Lermontova M. Yu isithombe ingelosi amnyama.